Biofertilizers megide mmebi ala | Green Renewables
Biofertilizers megide mmebi ala
Portillo nke German | 17/05/2022 19:25 | Gburugburu
Ọrụ ugbo amụbaala iji fatịlaịza kemịkal eme ihe kemgbe ọtụtụ afọ iji gboo agụụ siri ike nke ndị mmadụ na-achọ nri. Nsogbu na fatịlaịza kemịkal ndị a bụ mmebi ala nke ọ na-akpata. Iji belata nsogbu ndị a, ndị biofertilizers. Ndị a biofertilizers na-agbalị ibelata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ọrụ ugbo, na-ezere mmebi ala na imeziwanye àgwà ya.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị otu esi eji biofertilizers eme ihe megide mmebi ala yana uru ha nwere karịa nke omenala.
1 Biofertilizers megide mmebi ala
2 Biofertiliser microorganisms
3 Uru nke biofertilizers
4 Isi iche
Mbibi ala bụ nsogbu siri ike ma na-eto eto sitere na ijigharị, njikwa adịghị mma na iji ihe ndị sitere n'okike eme ihe n'ụzọ ezi uche na-adịghị na ya. A na-eme atụmatụ na ihe karịrị 70% nke ala obodo na-emebi emebi n'anụ ahụ, kemịkalụ ma ọ bụ nke ndu N'ihi ọrụ ugbo siri ike, iji emeghị ihe eji arụ ọrụ ugbo, iwepụ ihe ọkụkụ na enweghị fatịlaịza organic, ala ya na-akawanye njọ kwa ụbọchị.
Nsogbu ndị bụ isi na mmebi nke ihe ndị sitere n'okike bụ ihe metụtara mbuze, salinization na mbelata ebuka organic, yana mkpirisi nke igwe na-arụ ọrụ ugbo kpatara. Nke a na-egosirịrị nsogbu nke mmebi anụ ahụ. Usoro mmepụta ugbo nwere mmetụta dị mkpa na gburugburu ebe obibi, ihe omume na ụdị dị iche iche nke ihe ndị dị n'ime ala. Ọgba aghara na iji ihe eji arụ ọrụ ugbo emela ka ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ nke ụdị ndụ ndụ bi na ya belata nke ukwuu.
Mgbe ejiri ala mee mgbanwe na gburugburu ụwa, ọnụ ọgụgụ nke ụdị osisi na-ebelata nke ukwuu na ọnụọgụ na ịdị mma nke ihe onwunwe ha dị iche iche na mgbọrọgwụ usoro. Nke a na-ebute ihe ndị dị n'ime ala na ala ala, nke na-egbochi ọdịdị ala dị iche iche na nri nri.
Dabere na nke a dị n'elu, ọ dị mkpa ịmepụta teknụzụ ndị nwere ike ime ka ihe ndị dị n'ime ala dị elu, chekwaa mmiri nke ala, meziwanye iji fatịlaịza rụọ ọrụ nke ọma, na ibelata mmetọ ala na mmiri. Emeela ọtụtụ ọmụmụ banyere iji biofertilizers dị ka nhọrọ iji meziwanye ọnọdụ ala na ịbawanye mkpụrụ. E kwubiri na ngwa nke fatịlaịza organic dị nnọọ mma maka melite ọnọdụ ala n'ihi oke microorganisms ha nwere.
Microorganisms nwere usoro dị iche iche nke na-akwalite uto osisi site na rhizosphere symbiosis, ihe kachasị mkpa bụ: ịba ụba nke ihe oriri na mmiri, iwebata nitrogen n'ime usoro ala osisi site na biofixation site na nje bacteria nke genus Rhizobium, wdg.
Ihe ndị a na-emepụta biofertilizers na-enweta ala karịa fatịlaịza a na-ahụkarị ebe ọ bụ na ebelata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ukwuu. N'ihi iji microorganisms nwere ike imeziwanye ọnọdụ ala na àgwà ya, ọ ga-ekwe omume ịnweta ọganihu na ihe ọkụkụ na-enweghị mkpa imebi ala.
Uru nke biofertilizers
Uru ndị bụ isi nke biofertilizers na-enye bụ:
Belata ojiji nke fatịlaịza kemịkalụ. Dị ka ihe ọzọ na fatịlaịza kemịkalụ, biofertilizers na-enwe mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi site n'ibelata iji amonia na-emepụta fatịlaịza kemịkal, na-ebelata oriri ike zuru ụwa ọnụ.
Mmepe ihe ubi na nlekọta ala. Ojiji nke microorganism a na-akwado ọmụmụ nke ala na ihe ọkụkụ, na-egbochi mbuze ma na-akwado nhazi nke ọma nke ala.
Melite ikike nri nke osisi. Iji ụdị fatịlaịza organic a nwere ike ịbawanye nnabata nke nri ihe ọkụkụ, dị ka nitrogen, zinc ma ọ bụ phosphorus.
Ha na-ekwe ka ojiji nke organic mkpofu.
Mmụba na-abawanye site na 30%. Imeziwanye ala na-enyere ihe ọkụkụ aka ito eto nke ọma n'oge ọkọchị.
Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo amataghị ihe ndị na-eme ka biofertilizers na-emezigharị ma e jiri ya tụnyere kemịkalụ, na-eke akụkọ ifo ụgha na ịgọnarị ojiji ha. Fatịlaịza ọdịnala na-agbakwunye kemịkalụ na gburugburu ebe obibi, dị ka ọla dị arọ nke a na-ahụ n'ime ihe nke ha. N'akụkụ aka nke ọzọ, iji ezi uche eme ihe nke biofertilizers adịghị enwe mmetụta ọjọọ na gburugburu ebe obibi n'ihi na ihe mejupụtara ya enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ.
Na mgbakwunye, iji biofertilizers na-akwado ọrụ antiparasitic ma na-abawanye ma ọ bụ na-echebe osisi site na pests. N'aka nke ọzọ, fatịlaịza kemịkal na-eso akpata ọzara, ọ pụkwara ime ka ala na-efunahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-adịgide adịgide. Na mgbakwunye, iji biofertilizers na-enyere aka n'imeghachi ala na ihe ọkụkụ, ebe organic okwu na microorganisms nwere ike idozi nri ma melite nhazi ala.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ojiji nke biofertilizers megide mmebi ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Biofertilizers megide mmebi ala